Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Baabuur Isboorti oo Cusub oo ka hooseeya $30,000
Iyada oo leh xoog faras badan iyo xoog badan, gudaha iyo dibadda dib loo habeeyay iyo bilawga Qiimaha Tafaariiqda ee Soo-saareha (MSRP) oo ah $27,700 oo keliya, 2022 GR86-cusub ayaa lagu qiimeeyay farxad.
Imaanshiyaha shirkadaha Toyota bishii Diseembar waxaana lagu heli karaa laba darajo, GR86 iyo GR86 Premium, jiilka cusub ee gaadhiga darawalka Toyota wuxuu keenayaa madadaalo baabuur isboorti oo la awoodi karo, dhammaantoodna leh matoor weyn oo 2.4 litir ah oo bixiya ku dhawaad ​​18% xoog faras ah iyo 11% xoog badan.
Darajada GR86 Premium waxay ku socotaa heerka caadiga ah 18-inch, 10-spoke aluminium alloy wheels oo leh taayirada Michelin Pilot Sport 4® iyo qashin-qubka weyn ee dhabarka. Gudaha, kuraasta hore ee madow iyo caddaanka ah ee leh lix-jid oo la hagaajin karo ayaa leh kuleyl laba heer ah iyo daloolo UltraSuede oo daloola oo leh taageerooyinka maqaarka. Lahjadaha madow iyo qalinku waxay ku sii socdaan ilaa isteerinka maqaar, kabaha shaqada iyo biriiga gacanta. Nidaam cusub oo 8-inji ah oo shaashad taabasho ah oo leh siddeed-ku-hadlayaal ayaa keenaya isku xidhka iyo laxannada darawallada.
Fasalka GR86 wuxuu ku fadhiyaa 17-inji, 10-hadal mashiin-dhammaan taayirro aluminium ah oo ku duuban Michelin Primacy HP® taayir. Astaamaha gudaha waxaa ka mid ah maro madow oo lix-gees ah oo lagu hagaajin karo G-embossed leh oo leh dhar isboorti oo dhinac ka sameysan oo leh vinyl muuqaal leh iyo dhar isboorti oo gooyay dash, albaabada iyo isteerinka. Nidaamka cusub ee 8-inch touchscreen multimedia oo leh lix ku hadla ayaa yimid heerka.
Waxaa lagu heli karaa xulashada buug-gacmeedka ama paddle-ka wareejinta tooska ah, waxay ku timaadaa doorashada toddoba midab oo dibadda ah: Track bRED, Halo White, Silver Silver, Pavement Gray, Raven Black iyo Neptune ama Trueno Blue. Jiilka cusub ayaa sidoo kale calaamad u ah horumarkiisa safka Gazoo Racing oo wata calaamad cusub oo xagal ah oo GR86 ah oo ay ku lammaan tahay calaamada Toyota's GR. Moodooyinka ayaa la filayaa inay yimaadaan meheradaha Toyota bishan Disembar.